Sina pabrik avo lenta miakatra vy ary mpanamboatra | Honghua
Ity rafitra firafitra avo lenta ity, izay nantsoinay, dia rafitra firafitry ny rafitra miorina. Ny zana-kazo miendrika braced dia kofehy mitsivalana cantilevered manohitra ny sisin-dàlana dia mavesatra indrindra ireo mpikambana diagonal izay miaraka amin'ny fehikibo, mamorona ny tranokalan'ny vongan-kazo mitsivalana, miaraka amin'ireo tsanganana mihetsika toy ny korda.
Tetikasa Pearl River New Town-
Faritra fananganana: 440000㎡
Toetra mampiavaka ny maritrano:
Voahosotra tamin'ny 15 Oktobra 2010 ny Tilikambo Fiambenana New Town Andrefana, trano fivarotana vy be, Guangzhou International Financial Center, izay 432 metatra ny haavony ary misy rihana 103. Nirehitra ofisialy ny tilikambo andrefana, izay ampahan'ny ny tetikasa jiro ho an'ny lalao aziatika.
Ny endrik'ilay tilikambo andrefana dia toy ny "kristaly mangarahara", ary ny firafitra dia manana rafitra firafitra fantsom-bozaka mirona tendro vaovao. Ny fantsom-by vita amin'ny vy vita amin'ny beton dia manana fantsona fanampiny mirona, ny rindrin'ny volo fanitsiana vita amin'ny beton dia misy fantsony anatiny, ary ny gorodona vita amin'ny vy-betonika dia mampifandray ireo fantsona anatiny sy ivelany. fahamendrehana eo anoloana sy fahombiazana amin'ny seismika tsara. Raha sendra fisehoan-javatra tampoka toy ny fiatraikany sy ny fipoahana dia ho simba ihany ny ampahany, ary tsy hiteraka valiny sy fianjerana, noho izany dia avo ny fiarovana ny firafitr'izy ireo. Nasehon'ny andrana fa mahazaka ont tsy fahita firy ny tilikambo horohoron-tany (ny hamafin'ny fanamafisana orina horohoron-tany any Guangzhou dia fito degre), amin'ny hetsiky ny rivotra iray taona lasa izay, dia tsy hahatsapa ho mahazo aina ny olona ao amin'ny tilikambo. Io karazana rafitra rafitra io ihany no ampiasaina eto amin'izao tontolo izao.
Ity rafitra firafitra avo lenta ity, izay nantsoinay, dia rafitra firafitry ny rafitra miorina. Ny zana-kazo miendrika braced dia kofehy mitsivalana cantilevered manohitra ny sisin-dàlana dia mavesatra indrindra ireo mpikambana diagonal izay miaraka amin'ny fehikibo, mamorona ny tranokalan'ny vongan-kazo mitsivalana, miaraka amin'ireo tsanganana mihetsika toy ny korda. Ny mpikambana mihetsiketsika dia manafoana ny fikororohana amin'ny andry sy tsanganana. Ny vatan-kazo vy, ny andry vy ary ny tsanganana vy dia namboarin'ilay orinasa avokoa.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fananganana vy
Ity rafitra ity dia mety amin'ny tranobe marobe ao amin'ny haavo ambany ka hatramin'ny afovoany.
mahomby sy ara-toekarena amin'ny fanatsarana ny hamafin'ny sisiny sy ny fanoherana ny rafitra rafitra henjana.
Io rafitra io dia mamela ny fampiasana mpikambana malemy ao amin'ny trano iray.
Tombony miavaka amin'ny rindrina misy braced dia, mety hiverimberina ny haavon'ny trano miaraka amin'ny toekarena miharihary amin'ny famolavolana sy ny famoronana.
Saingy, mety hanakana ny drafitra anatiny sy ny toerana misy varavarana sy varavarankely io. Izany no antony hampidirana azy ao anatiny miaraka amin'ny tsipika rindrina sy fizara.
Previous: Trano vy avo lenta
fahaizana Ny kilasy voalohany amin'ny mari-pahaizana China Steel Fanamboarana zana-kazo manokana kilasy faha-2
● ISO9001: Orinasa voamarina 2008